Dengue Fever Preventation at ShwePanKhine
Dengue Fever isamosquito-borne disease transmitted byamosquito's bite. Dengue mostly spreads out in the rainy season.
Educational Talk in Dondaw
On June 28th, 2019 MYTCL team, which includes the representative from PR & CSD and from the QHSE Departments, commenced an educational session with the Dondaw School children on topics such as health knowledge, pollution, village environmental concerns and the works that are conducted by the professional
Fire safety isavery important issue within the MYTCL workplace, and in every area of operations.
ရွှေပန်းခိုင်ကျေးရွာ တွင် သွေးလွန်တုတ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်ခြင်း
သွေးလွန်တုတ်ကွေးရောဂါသည် ခြင်မှပေါက်ဖွားပြီး ခြင်ကိုက်ခြင်းဖြင့် ကူးစက်စေနိုင်သော ရောဂါ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် မိုးရာသီတွင်အများဆုံးပြန့်နှံသည့်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်သည်။
၂၀၁၉ခုနှစ် ဇွန်လ (၂၈) ရက်နေ့တွင် မြန်မာယန်စီ PR & CSD ဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ်များ နှင့် QHSE ဌာနရှိ ဝန်ထမ်းများမှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန် နှင့် စီမံဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ကျန်းမာ ရေးဆိုင်ရာ ဗဟုသုတ၊ လေထုညစ်ညမ်းမှုများ၊ ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပတ်သက်သောအရာများ အစရှိသည့် ခေါင်းစဉ်များဖြင့် ဒုန်းတောကျေးရွာရှိ ကလေးများအတွက် အသိပညာပေးဟောပြောပွဲ ကို ကျင်ပပေးခဲ့သည်။
မီးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးသည် မြန်မာယန်စီလုပ်ငန်းခွင်အတွင် အရေးကြီးသော ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သည်။
The Assistance for Communities
The surrounding villages, schools and monastic sites often request IBC containers (Intermediate Bulk Container) for the use of water storage.